Akụkọ - you mara ma ọ bụrụ na edochiri ihuenyo mbụ mgbe ị na-arụzi ekwentị mkpanaaka? Bata kụziere gị otu esi amata ezigbo ihuenyo na ihuenyo adịgboroja
Ọtụtụ mgbe, anyị na-ezutekarị ọnọdụ na ekwentị mkpanaaka ihuenyo agbajikwa site na mberede, ụfọdụ na-agbajikwa iko mkpuchi, ụfọdụ ndị dị n'ime ihuenyo adịghị egosipụta na-agbajikwa. Onye nrụzi nke atọ ga-ajụkarị gị ma ịchọrọ nke mbụ ma ọ bụ nke nkịtị. N'ozuzu, ọdịiche ọnụahịa abụghị nnukwu, nke ga-eduzi gị iji dochie nke mbụ. Mana ị maara ma ihuenyo ọ dochiri bụ nke mbụ? Onye editọ na-esote na-akụziri gị otu esi amata ihuenyo ziri ezi na nke ụgha.
Nke mbụ, anyị ga-ekwu maka ihu elu dị mfe. Dị ka anyị kwuru, mbido mbụ sitere na ndị nrụpụta bụ ihu igwe mgbakọ. Yabụ, ihe akpọrọ mpempe akwụkwọ mpụga nke mbụ dị oke ụkọ. Ihe dị iche n'etiti ndị mbụ na ndị nkịtị na ọtụtụ ụlọ ọrụ mmezi bụ ihe dị iche n'agbata iko na azụ na iko nkịtị, ma enwere ezigbo mpempe akwụkwọ mpụga nke mbụ.
Na mkpokọta, ihuenyo edochilarị gam akporo igwe dị ogbenye. Ozugbo agbajiri ya, ọ ka mma. Nkà nke iche bụ ị toa ntị na ire ụtọ nke 2.5D radian nke ihu ihuenyo na ọnụọgụ mmanụ mmanụ. N'ozuzu, akụkụ ndị nwere radian 2.5D na ihuenyo mpụga dara ogbenye adịghị mma ma dịkwa mma. Ọnụahịa nke ụdị ihuenyo a dị n'etiti 80 na 90. Ezi ihuenyo dị mma ma dị mma, Ngwunye mmanụ dị oke, mana ọnụahịa agaghị agafe 300 yuan. Ọ bụrụ na onye na - azụ ahịa rịọ gị ka ị rịọ maka RMB 4500, ị nwere ike ịhapụ ozugbo. Ọ dịghị mkpa ịrụzi ya ebe a. N'ihi na nnukwu ina na zuru okè ọkọnọ yinye nke Apple si mpụga ihuenyo, àgwà nke mpụga na ihuenyo dị mma nke ukwuu, ọbụna tụnyere ndị mbụ na ihuenyo, na price bụ karịa 300 yuan.
A ka nwere ọtụtụ ntanetị mbụ na ahịa maka mgbakọ ihuenyo, nke sitere na ọwa pụrụ iche dị iche iche. E nwere ọtụtụ ụdị nke na-abụghị ndị mbụ meziri, gụnyere n'azụ mgbali ihuenyo na cover efere dochie, mbụ LCD ihuenyo na-agbanwe agbanwe ewepụghị USB ma ọ bụ backlight, elu n screenomi ihuenyo, wdg mgbe na-agụ ụdị, ị nwere ike na-ekwu okwu banyere nkà.
N'oge a, ọtụtụ ekwentị mkpanaaka bụ OLED meziri, nke na-efu nnukwu ego. N'ezie, ọnụahịa nke ịgbanwe ihuenyo dịkwa elu. Agbanyeghị, enwere ọtụtụ ndị na-enwetakarị obi ọjọọ na-achọghị iji dochie anya ihuenyo mbụ maka gị, mana dochie ya na otu LCD ihe ngebichi a dị ọnụ ala, n'ihi na enwere ike ịsị na nke a na-aba uru, ihuenyo nwere ike irite 500 ma ọ bụ 600 yuan, n'èzí anaghị ahụ anya, ọ bụrụ na anyị ezute nke a, anyị nwere ike were iko na-eto eto iji mata.
Gbanwee ihuenyo na ihuenyo ọcha na-enweghị ederede ma ọ bụ ụkpụrụ dị ka o kwere mee, ma lelee ndokwa pixel nke ihuenyo na iko na-eto eto. Dị ka iPhone X na n'elu usoro, ọtụtụ anụ ụlọ flagship bụ Samsung si diamond pentale sub-pixel ndokwa, dị ka nke dị n'elu.
Huawei P30 pro na nwunye 20 Pro bụ ndokwa “Zhou Dongyu” nke BOE, yana ndokwa pentile nkịtị nke LG, dị ka egosiri na ọnụ ọgụgụ a dị n'elu,
Nnọchi LCD dị nnọọ iche. Otutu n’ime ha doziri ndokwa RGB nke nwere akụkụ anọ. Dị ka egosiri na ọnụ ọgụgụ dị n'elu, ọ bụrụ na ịchọta na ekwentị mkpanaaka gị na mbụ bụ OLED ihuenyo ma jiri LCD dochie ya site na onye na-erite uru, ịnwere ike iji usoro a iji gaa ya ozugbo iji funahụ ego.
Methodzọ ọzọ bụ ịchọpụta ma ihuenyo mpụta nke nzukọ a bụ nke izizi, dịka usoro ahụ dị n'elu. Na mgbakwunye, na ihuenyo nwere ike ịbụ budata elu karịa ókè mgbe na-agbanwe agbanwe na ihuenyo. N'ozuzu, mgbakọ ihuenyo nke na-abụghị nke mbụ ga-adị okpu karịa nke mbụ. N'ihi ya, a ga-enwe ndị a ma ama.
Ihe di n’elu bu uzo iji mejuputara gi. Enwere m olileanya na ọ ga-enyere gị aka.